Mepụta usoro mmepe ọhụụ E kwesiri iji ezigbo igwe rụọ ọrụ na "agụba" -Nkparịta ụka ya na Luo Tiejun, onye isi oche nke China Iron and Steel Association - China Foshan Hermes Steel
Mepụta usoro mmepe ọhụụ A ga-eji ezigbo igwe rụọ ọrụ na "agụba" -Nkparịta ụka ya na Luo Tiejun, onye isi oche nke China Iron and Steel Association
"N'okpuru ọhụrụ mmepe ụkpụrụ, na ígwè ụlọ ọrụ ga-weghara ohere ọhụrụ na-eme n'ọdịnihu site na-akpụ a ọhụrụ itule nke anụ ụlọ ọkọnọ na ina na-ekere òkè na elu-larịị imekọ ihe ọnụ na mba na mpi." Luo Tiejun, osote onye isi oche nke China Iron and Steel Association, kwuru na mkparịta ụka pụrụ iche na Xinhua News Agency na nso nso a. Ndozigharị nke nnweta mgbanwe akụkụ ọkọnọ nke "Atụmatụ afọ iri na atọ nke 13" eguzogidela ule nrụgide nke afọ pụrụ iche nke afọ 2020. industrylọ ọrụ nchara, nke na-eguzo na mmalite mmepe ọhụụ, ga-aga n'ihu na-agbanwe mkpebi siri ike na jiri nwayọọ nwayọọ melite ikike ndị bụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ na ọkwa ọgbara ọhụrụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Were usoro mmụta sayensị na teknụzụ dị ka mmalite iji melite ogo na ọkwa nke ọkọnọ, ma hapụ ezigbo igwe na "agụba".
“Atụghị m anya ya!” Luo Tiejun chetara 2020 gara aga, “Enwere m nchegbu nke ukwuu na isi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ga-agbaji na ụlọ ọrụ ga-efu ego. N'ihi ya, ọ dịghị efu na otu ọnwa. Ọ bụ naanị uru ole ị ga-erite. ”
Ihe omuma data nke China na nchara gosiputara na na 2020, uru nke ulo oru nchara nke gunyere na onu ogugu isi na-abawanye site na onwa site n’onwa June site na onodu ugwo na-aga n’ihu n’adighi kwa afo. Ọnụ ego a rụzuru n'ime afọ niile nọgidere na-eto.
"N'afọ gara aga, mgbake na-aga n'ihu nke akụ na ụba China emeela ka ụlọ ọrụ nchara ígwè gafere atụmanya." Luo Tiejun kwuru, sị, “Isi ihe ọzọ dị mkpa bụ na nnweta-akụkụ nhazi usoro. N'ime afọ ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ ndị na-akpụpụta igwe enwetawo ego, ọnọdụ ha n'isi obodo abawanyewanye. "
Luo Tiejun kwenyere na ụlọ ọrụ nchara egosiputala ikike ike ihe egwu dị na ya site na ọganihu na-enweghị atụ nke mgbanwe ndozi akụkụ yana uru ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ zuru ezu gbakọtara kemgbe ọtụtụ afọ.
A ga-akwado uru ndị a na 2020 mgbe ọrịa zuru ụwa ọnụ na-agbasa. Na 2020, n’otu aka, ụlọ ọrụ igwe ji igwe rụọ ọrụ dị mkpa na nnyefe mberede, enyemaka ahụike, ịmaliteghachi ọrụ na nrụpụta, na nkwụsi ike nke usoro ọrụ mmepụta ihe; n'aka nke ọzọ, ina na mmepụta olu nke China si ígwè ụlọ ọrụ ma kụrụ ndekọ highs N'otu oge, ọ na-eduga a ọkpụrụkpụ abawanye na ígwè bubata, na a phased net mbubata nke crude ígwè amalitela na-etolite si June.
Luo Tiejun kwuru, "Dị ka mba kachasị ukwuu na-emepụta ígwè, China abụghị nanị na ọ rụghị ọrụ ike nke ụwa, kama o nyere nnukwu ahịa maka ịgbari ikike mmepụta nke ụwa."
N’ileghachi anya na 2020 pụrụ iche, nchara nchara obodo m gara n’ihu na ọkwa dị elu site na ịchọ ọdịiche dị ala, na-egosi nkwụsi ike nke akụnụba obodo m; n’otu oge ahụ, ọnụ ahịa nke ọla igwe e webatara na-agbanwe ngwa ngwa, na-akụkwa isi ihe mgbu nke ụlọ ọrụ ahụ ọzọ. Ọ Theụ na nchekasị nke ụlọ ọrụ ígwè na nchara bụ nanị profaịlụ nke mba m ịbanye n'ọgbọ ọhụrụ nke mmepe na mgbanwe ọhụrụ na ohere na ihe ịma aka.
Iguzo na mmalite mmalite nke "14th Five-Plan Plan", olee otu ụlọ ọrụ nchara nwere ike isi mezie mmejọ ya ma nwee mmalite dị mma?
Luo Tiejun kwuru na mkpali maka mmụba ikike, nrụgide gburugburu ebe obibi siri ike na-arịwanye elu, ịdabere na akụ ndị ọzọ, na ịta ụlọ ọrụ dị ala ga-abụ nsogbu ndị chere ụlọ ọrụ nchara ahụ ihu oge ụfọdụ. "Industrylọ ọrụ ndị a na-emepụta nchara nwere adịghị ike iji mezuo iwu nke usoro ikike ikike ụlọ ọrụ na iwulite usoro ọrụ ọgbara ọhụrụ."
“Optimising na ulo oru mbo okirikiri nhọrọ ukwuu dị ezigbo mkpa inokota ulo oru ntọala ikike. N'ihi nrụgide nke igwe eji arụ ọrụ, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ígwè n ’mba ọhụrụ m nwere mmasị ịzụlite n'akụkụ ụsọ mmiri.” Luo Tiejun kwuru, nke a bụ ọnọdụ ọdụ ụgbọ mmiri dị n'ụsọ oké osimiri, ụgwọ ọrụ lọjistik, na nkwa akụrụngwa Ihe a na-apụghị izere ezere nke ọtụtụ uru dịka ikike gburugburu ebe obibi.
Ma ọ rụtụkwara aka na ịkwalite nhazi ụlọ ọrụ nke igwe na igwe igwe enweghị ike 'ijupụta.' Uzo okpukpu abuo aghaghi ibu ahia ahia nke mpaghara choro ohere na akuku na ikike gburugburu ebe obibi, a ghaghi itule nguzozi nke ulo oru mmeputa obula nke dabere na isi uzo na ala nke ulo oru mmeputa.
"Industrylọ ọrụ nchara ga-agbanwe echiche nke afọ ojuju nke ọdịnala, belata mbupụ nke ngwaahịa niile, gbaa ume mbubata ngwaahịa ndị bụ isi dị ka akwụkwọ ego, ma belata ike na oriri igwe." Luo Tiejun kwuru na nchara ụlọ ọrụ ga-mikwuo emie ọkọnọ-n'akụkụ bughi mgbanwe na mkpebi na-ebelata Mbelata. Crude ígwè mmepụta ikike, miri-azụlite green na ala-carbon mmepe ụzọ, na-eduga a ọhụrụ anụ ụlọ ọkọnọ na-achọ itule na elu-edu ọkọnọ, na-ekere òkè na elu-larịị mba imekọ ihe ọnụ na mpi.
Luo Tiejun kwuru na mmalite nke usoro atumatu metụtara yana ndozi usoro dị ka nnọchi ikike, ịbubata ihe eji arụ ọrụ ọla kọpa, na nrụpụta carbon, ụlọ ọrụ igwe na igwe kwesịrị iji ụzọ nke ịkwalite mmakọ na ịhazigharị ma melite imegharị ihe maka usoro ihe nchara iji kpochapụ mpaghara n'ụsọ oké osimiri na n'ime ime obodo. Mmepụta ike, na-akwalite nkwado mmepụta mba ofesi, jiri nwayọ melite ikike nke ụlọ ọrụ na ọkwa ọgbara ọhụrụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, wee jiri sayensị na teknụzụ dị ka ike dị mkpa iji melite ogo na ọkwa nke ọkọnọ, nke mere ezigbo igwe nwere ike iji dị ka "agụba".
Na-eche ọdịnihu ihu, gịnị bụ "agụba" maka ụlọ ọrụ nchara?
Luo Tiejun kwuru na ọ dị mkpa ijide ohere na-adabere na usoro nke ịgbasawanye mkpa ụlọ. Site na mmepe siri ike nke 5G + Internet mepere emepe, itinye ego obodo m na akụrụngwa ọhụrụ yana nrụpụta dị elu na-aga n'ihu na-abawanye, nke na-aga n'ihu na-agbanye ume ọhụrụ na nkwalite nke nchara nchara na ụlọ ọrụ nchara ndị dị ala dịka ụgbọ ala, ngwa ụlọ, na ngwaahịa ndị amamịghe.
"Njikọ na nhazigharị nke agbụ na usoro mgbada na-agbada bụ mkpa ọhụrụ maka ụlọ ọrụ nchara iji ghọta mmepe ụlọ ọrụ n'okpuru usoro mmepe ọhụụ." Luo Tiejun kwusiri ike na ọ dị mkpa iji mee ka njikọta na nhaziwanye ngwa ngwa n'ime ụlọ ọrụ ahụ, ma gaa n'ihu na-akwalite imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ ndị isi na nke mgbada na ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji wulite ụlọ ọrụ ndị na-agbada ala na ụlọ ọrụ nyocha na-emekọ ihe ọnụ iji mezuo iji hụ ihe ọhụrụ na-arịwanye elu mkpa nke ndị ọrụ ma gbasaa ma mee ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe sie ike.
O kwuru na "Belt na okporo ụzọ Initiative" na-eduga n'ọkwa dị elu nke imeghe, ọ na-ewetakwa ohere ọhụụ maka ụlọ ọrụ nchara "ịga ụwa niile". Steellọ ọrụ nchara nwere njirimara nke nnukwu itinye ego na mkpa ụlọ ọrụ siri ike, ọ bụkwa ihe dị mkpa na-arụ ọrụ na nkwonkwo nkwonkwo dị elu nke "Belt and Road".
"International ikike imekọ ihe ọnụ bụ otu n'ime ụzọ dị mkpa maka China ígwè ụlọ ọrụ na-achọ mgbanwe na upgrading." Luo Tiejun kwuru na ụlọ ọrụ nchara ga-enwerịrị ohere nke ịkpụzigharị usoro ọrụ mmepụta ihe zuru ụwa ọnụ, ma n'otu oge ahụ jiri ezi uche nyochaa ohere maka imekọrita ikike mba ụwa, ịbawanye nhazi na imekọ ihe ọnụ, ma chọpụta ọnọdụ ịkwado, mee ka mgbochi ihe egwu dịkwuo ike, ma gbalịsie ike ịmepụta ohuru mba mpi uru na elu-elu mba mmepụta ikike imekọ ihe ọnụ.
Post oge: Jan-05-2021